गायक गायिका बन्न चाहनेलाई माध्यम बन्दै प्लाटफर्म
गायन कलामा लाग्न चाहनेका लागि हौसला र उर्जा प्रदान गरी उनीहरुको कलालाई प्रस्फुटन गराउनका लागि प्लाटफर्म नामको कार्यक्रम हुने भएको छ । आयोजकले आफ्नै रेकर्डिड. स्टुडियोमा सामान्य अडिसन लिने र महिनाको अन्तिम शनिबार बागबजार स्गित यति प्लाजामा दिनको ३ बजे कार्यक्रम गरी उत्कृष्ट एक घोषणा गर्ने बताएको छ ।
माघ महिनाको अन्तिम साताबाट कार्यक्रम शुरु हुने बताईएको प्लेटफर्मको उत्कृष्ट एकलाई आफ्नै रेकर्डिड. स्टुडियो म्युजिक पार्कमा एउटा गित निशुल्क रेकर्डिड.को सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रमको आयोजक संस्था संगित अनुसन्धान तथा विकास मञ्च हो ।